Inona no atao hoe ota | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Satria manana andraikitra manokana amin'ny fahotantsika manokana isika sy ny toe-panahintsika, ny fibebahana dia natao manokana. Samy nanota isika rehetra (Romana 3,23:1; 1,8 Jaona) ary ny Soratra Masina dia mamporisika antsika tsirairay hibebaka sy hino ny filazantsara (Marka 1,15:2,38; Asan’ny Apostoly).
Ny teny grika nampiasaina tamin'ny Testamenta Vaovao dia teny mifandraika amin'ny tsy misy tanjona (Jaona 8,46:1; 15,56 Korintiana 3,13:1,5; Hebreo 1:1,7; Jakoba; Jaona, sns); miaraka amin'ny hadisoana na hadisoana (Ny fifindra-monina ao amin'ny Efesiana 2,1; Kolosiana 2,13 sns); miaraka amin'ny sisintany sisintany (Ny fifindra-monina ao amin'ny Romana 4,15:2,2; Hebreo sns); amin'ny zavatra atao amin'Andriamanitra (olona tsy tia an'Andriamanitra ao amin'ny Romana 1,18:2,12; Titosy 15; Jodasy, sns); ary amin'ny tsy fanarahan-dalàna (Ny tsy fahamarinana sy fandikan-dalàna ao amin'ny Matio 7,23:24,12; 2:6,14; 1 Korintiana 3,4; Jaona, sns).